किन AWS प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण छ? AWS प्रमाणित विकासक वेतन
13 अप्रिल 2017
AWS प्रमाणीकरण को मूल्य के हो?
AWS प्रमाणित विकासक वेतन
AWS प्रमाणीकरणमा पथ सुरु
AWS प्रमाणित समाधान वास्तुकार - सहयोगी स्तर
AWS प्रमाणित समाधान आर्किटेक्ट - व्यावसायिक स्तर
AWS प्रमाणित विकासकर्ता - सहयोगी स्तर
AWS प्रमाणित SysOps प्रशासक - एसोसिएट
AWS प्रमाणित DevOps अभियंता - व्यवसाय (बीटा)
यो सामान्य सिक्न छ कि AWS पुष्टि पुर्याउने तपाईंको साथीहरू र व्यवसायको अनुसार तपाईंको संलग्नताको योग्यता र AWS-based अनुप्रयोगहरूको साथ तपाइँको सम्बद्ध क्षमता विस्तार गर्न असाधारण दृष्टिकोण हो। बहरहाल, त्यहाँ अर्को फाइदा छ जुन लामो समयसम्म मापन गरिएको छैन। ग्लोबल ज्ञान र विन्डोज आईटी प्रो द्वारा निर्देशित 2015 आईटी कौशल र वेतन सर्वेक्षणको कारणले थाहा पाएको छ कि चार AWS मान्यताको सामान्य वेतन 100,000 $ पार गर्यो। यद्यपि कुनै आश्वासन छैन कि एक पुष्टिले एक छ-आंकडा क्षतिपूर्तिको बराबर गर्दछ, यसले सकारात्मक रूपमा कुनै पनि हानि गर्न सकेन।
AWS प्रमाणित विकासकर्ता - एसोसिएट स्तर $ 137,825
AWS प्रमाणित समाधान आर्किटेक्ट - व्यावसायिक स्तर $ 117,434
AWS प्रमाणित समाधान आर्किटेक्ट - एसोसिएट लेवल $ 114,935
AWS प्रमाणित SysOps प्रशासक - एसोसिएट लेवल $ 108,046
XWUMX आलेखमा यो एक AWS पुष्टि प्राप्त गर्न लिन्छ के बारे मा परिक्षण गर्यो। (अर्को विन्डोमा खुल्छ)
AWS affirmations (र AWS तयार गर्दै) व्यवस्थित डिजाइनर, विकासकर्ता र ढाँचा संचालन पर्यवेक्षकहरूका लागी भाग आधारित परियोजना हुन्। प्रत्येक भाग भित्र, साझेदार र विशेषज्ञ स्तर पुष्टिकरणहरू विशेषताहरू छन्। तैपनि तैपनि आवश्यक पर्दैन एक अनुमोदन परीक्षा को पूर्वप्राप्त गर्न, यो असाधारण सुझाव दिइएको छ।
यो पुष्टि स्वीकृत छ कि तपाईंसँग हस्तक्षेपमा पहुँचयोग्य, लागत-प्रभावी, दोष सहनशीलता र बहुमुखी परिचालित फ्रेमवर्क योजना योजनाको लागि AWS प्रयोग गरी ह्यान्ड-अप अनुभव छ। यसले AWS-based अनुप्रयोगको लागि अनिवार्यता र भिन्नता निर्धारण गर्ने क्षमतालाई प्रभाव पार्दछ र AWS चरणमा सुरक्षित र ठोस अनुप्रयोगहरूको निर्माणका लागि स्वीकृत प्रक्रियाहरू लिनको लागि लिन्छ।
निर्धारित तयारी: AWS मा आर्किटेक्टिंग
यस पुष्टिकरणले AWS चरणमा परिचालित सर्कलयुक्त अनुप्रयोगहरू र ढाँचाहरू उल्लेखित प्रवर्तित विशिष्टता र संलग्नतालाई अनुमोदन गरेको छ।
निर्धारित तयारी: AWS मा उन्नत आर्किटेक्टिङ
यो मान्यताले AWS चरणमा अनुप्रयोगहरू विकास र राख्ने क्रममा तपाईंको विशेष क्षमतालाई स्वीकृत गर्दछ। परीक्षा तपाईंको अन्तर्दृष्टि सँग सम्बन्धित विचारहरूमा परीक्षण गर्दछ:
अनुप्रयोगको लागि AWS सेवाको विशेषाधिकार पचाउँदै।
तपाईंको अनुप्रयोगबाट AWS सेवाहरूसँग संवाद गर्न AWS SDK को उपयोग गर्दै।
कोडको कम्पोज गर्ने जुन तपाईंको आवेदन कार्यमा AWS सेवाहरूको निष्पादनमा सुधार गर्दछ।
कोड स्तरीय अनुप्रयोग सुरक्षा (आईएएम भागहरू, प्रमाणपत्रहरू, एन्क्रिप्शन, र त्यस पछि।)
सुझाव तयार हुँदैछ: AWS मा विकास गर्दै
फ्रेमवर्क सञ्चालन प्रशासक
यो पुष्टिले तपाईंको अनुभवलाई प्रावधान, काम गर्दै र राख्ने फ्रेमवर्कहरू AWS मा चलिरहेको अनुमोदन गर्दछ। यसले तपाईंको क्षमता निर्माणको लागि जवाफको विशेषता र AWS मा काम गर्न पूर्वाधारहरू विभाजित र इकट्ठा गर्न दिन्छ। यो पनि AWS संचालन र व्यवस्था निर्देशन दिन को लागी तपाईंको क्षमता को अनुमोदन गर्दछ र उद्यम को जीवनचक्र मा सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरु को वर्णन गर्नुहोस।
निर्धारित तयारी: AWS मा प्रणाली सञ्चालन
यस मान्यताले AWS चरणमा परिसूचक अनुप्रयोग ढाँचाहरू काम गर्ने, निरीक्षण र निरीक्षण गर्न विशेष मालिकलाई स्वीकृत गर्दछ।
बल तपाईंको अदालतमा छ
त्यसोभए तपाईले एएसडब्ल्युको साथ शुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको खुट्टा गीला पाउनका लागि अविश्वसनीय दृष्टिकोण सर्वेक्षणमा निःशुल्क अनुदेशात्मक रेकर्डिङ र प्रयोगशाला प्रयोग गर्दछ। AWS साइटमा। हाम्रो एएसएस अनिवार्य पाठ्यक्रमहरू तपाईंलाई सहयोग पुर्याउन अघि अघि AWS को राडेटहरूमा लिन मद्दत गर्नेछ।